Outdoor fahazavana RGB Linear LED rindrina milina fanasan-damba mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED rindrina milina fanasan-damba > Outdoor fahazavana RGB Linear LED rindrina milina fanasan-damba
˜ design Ny endrika tsotra sy kanto ary maoderina no endrika ny fomba amam-panao sy ny maoderina.
â˜ † Ny jiro dia vita amin'ny aluminium avo lenta, ny tarehy dia mahatohitra ny corrosion sy ny electrostatic spray, ny fanadiovana ny tenany ary maharitra maharitra.
â˜ Ny firafitry ny famolavolana ankapobeny sy ny fametrahana plugins ao anaty rano, ny rano ary ny mahomby kokoa ary maharitra, hatramin'ny IP66.
˜ light Matetika fotsy hazavana sy teknolojia mifangaro hazavana fohy RGB, teknika fanaraha-maso DMX512 mahazatra, sy fiantraikany famolavolana mazava.
˜ Fametrahana fanodinana lehibe sy fihodinana lehibe mba hihaona amin'ny fepetra ilaina amin'ny tontolo iainana sy ny fanitsiana ny zoro fametrahana.
Hot Tags: Outdoor fahazavana RGB Linear LED rindrina milina fanasan-damba, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
Aluminum trano LED rindrina milina fanasan-dambatsy tantera-drano LED rindrina milina fanasan-dambaivelan'ny trano fahazavana LED rindrina milina fanasan-dambaRGB Linear LED rindrina milina fanasan-dambaloko fanovana LED rindrina milina fanasan-damba12W LED rindrina milina fanasan-damba18W LED rindrina milina fanasan-damba24W LED rindrina milina fanasan-damba30W LED rindrina milina fanasan-damba36W LED rindrina milina fanasan-damba